Nezvedu - Shandong Zhihua Pipe Viwanda Co, Ltd.
Nyanzvi mu Ductile Iron Grooved Pipe Fittings uye Coupling yeMoto Kurwisa
Shandong Zhihua Pipe Viwanda Co, Ltd, yakavambwa muna 2007, iri nyanzvi muDuctile Iron Grooved Pipe Fittings uye Couplings yeMoto Kurwisa. Inowanikwa mu "World kite Capital" Weifang Guta rinozivikanwa seChinese Grooved Pipe Fittings yekugadzira chigadziko uye padyo neQingdao chiteshi chengarava.
Zhihua yapfuura ISO9001 yemhando yepamusoro sisitimu uye zvigadzirwa zvaro zvakavezwa FM & U L & CE kutenderwa uye kunowanikwa kwevatengi OEM / ODM. Mazuva ano, kambani ine mafekitori mana ane vashandi vane hunyanzvi vane chiuru uye zvigadzirwa zviviri.WFHSH ® ™ & FANGAN ® ™ & SHUNAN® ™, Kufukidza nzvimbo 100000 mativi mita.
Kugadzira hakumboperi, kutsvagisa nekusimudzira hakumire.
Zhihua inozivikanwa uye inozivikanwa kwazvo pakati pevatengi nekuda kwekutenda kwayo, mhando, mutengo uye sevhisi. Zvigadzirwa zvaro zvine mitsetse zviri kutengeswa pese pese mumaguta e300 muChina uye zvinotumirwa kuUnited State, Middle East, South America, Southeast, Korea, Europe Ect.
Zhihua ine makuru mana ekugadzira mashopu ekurasa zvigadzirwa: Auto-vachikanda musangano, Mashini yemusangano, Painting musangano uye musangano wekuumba. Zhihua mafekitori akagadzirwa nezvivakwa zvemberi uye zvishandiso muindastiri. Huru zvigadzirwa zvigadzirwa zvine 8 yakanakisa 416 otomatiki mira kuumbwa yekugadzira mitsara; France FONDARC 180T otomatiki ejecha masanganiswa, inova akanakisa maasanganiswa kupota pasirese. 6 Medium magetsi mavira, 8 CNC yekuumba machining nzvimbo, 150 CNC lathes yeiyo Thread & Groove, 2 yakasarudzika mitsara yekumhara, 5 otomatiki epoxy & pendi michina mitsara, iyo yegore kugona kunopfuura 100000. matani.
Mu2019, Zhihua ichangobva kuvaka fekitori yekudzimisa moto, iyo inogona kuburitsa zvinodzima moto zvemamirioni mana pagore, mari yacho yose inodarika anopfuura mamirioni makumi maviri eRMB, ayo anonyanya kugadzira zvinodzima moto zvinotakurika, zvinodzima moto zvinotakurika carbon dioxide nezvimwe zvigadzirwa. kugadzira iyo Valve, Indoor hydrant, Kunze hydrant, Fire pombi adapteri uye nezvimwe zvinodzivirira moto zvigadzirwa.
Zvinhu zvakawanda zvinogona kuchinja, asi kuzvipira kwedu kune hunyanzvi, mhando uye basa revatengi hazviite. Bata Zhihua kuti utange kuchengetedza nguva uye mutengo.